PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: သတိ... မြေမြို၍ လူမျိုး မပျောက် လူမြို၍ လူမျိုးပျောက်မည်...!!!
သတိ... မြေမြို၍ လူမျိုး မပျောက် လူမြို၍ လူမျိုးပျောက်မည်...!!!
တရုပ် Gas ပိုင်းလိုင်း Project တွင် လာရောက် လုပ်ကိုင်နေသော တရုပ်များ မြန်မာတွေကို တရားဝင် လူမြိုဖို့ ကြိုးစားနေကြပြီ မကွေးတိုင်း စကုမြို့ နယ်တွင် ယခု အခါတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုပ်နိုင်ငံသို့Gas များပေးပို့ ရန် ပိုက်လိုင်း မြုတ်နှံမှု့ များလာရောက် လုပ်ကိုင်နေပါသည်။
ထိုကုမ္ပဏီမှ တရုတ်များသည် စကုမြို့ နယ်ရှိကျေးရွာ တစ်ရွာသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ကျေးရွာ လူကြီးကို တွေ့ဖို့တောင်းဆိုကာ သူတို့ဤ Project ကို လုပ်ကိုင် နေစဉ်အတွင်း မြန်မာ အမျိုးသမီး မိန်းမ လိုချင်ကြောင်း ကောင်းကောင်း ထောက်ပံ့ ထားပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှာဖွေပေးရန် လာရောက် တောင်းဆိုကြောင်း သိရပါသည်။
ကျေးရွာ လူကြီးမှ စိတ်ဆိုး၍ ဤကဲ့သို့မိန်းမမျိုး ဒီရွာမှာ မရှိကြောင်း နောင်အခါ လာရောက် ပြောဆိုရင် ရိုက်ထုတ်မယ် ဖြစ်ကြောင်း ပြောလိုက်မှ ထွက်သွားကြောင်း စကားပြန်ဖြစ်သူမှ ဒီရွာမရ နောက်ရွာများ ရှိသေးကြောင်း ပြော၍ ပြန်ခေါ်သွားကြောင်း ဒေသခံရွာသားများမှ Myanmar News Now ကို ပြောပြ ပါသည်။
မြေမြို၍ လူမျိုး မပျောက် လူမြို၍ လူမျိုးပျောက်ဟု နယ်စပ် လ၀က တွင်ချိပ်ဆွဲထားသော စာတန်း များသည် အလှပလား။ တရုပ်လူမျိုးများကို ယခုလို တရားဝင် လူမြိုဖို့ ကြိုးစားမှု ခွင့် ပြုထားသည်မှာ ဘယ်သူတွေပါလဲ?